Global Voices teny Malagasy » Madagasikara: ny momba ny fandroahana any Frantsa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Septambra 2007 6:26 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Lahatsoratra Malaza, Lahatsoratra voalohany!, Iray volana, Lahatsoratra roa, Telo volana, Lahatsoratra dimy, Enimbolana, Lahatsoratra folo, Herintaona, Roa taona, Lahatsoratra dimy amby roapolo, Lahatsoratra dimampolo, Dimy taona, Folo taona, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Hafanàm-po nomerika, Zon'olombelona, Zon'olombelona an-tsary
Ny tahotra mpifindra monina, nampian’ny fifampihenjanana eo amin’ny samihafa volon-koditra sy ny rotaka tany amin’ny faritra manodidina ny tanandehibe tamin’ny ririnina 2005, no nanosika ny Minisiteran’ny atitany frantsay hanenjana kokoa ny ady amin’ny fifindra-monina an-tsokosoko. Voakasik’izany politikam-pandroahana mpifindra monina tsy manana taratasy manome alalana hisari-monina ao Frantsa izany ihany koa ireo mpifindra monina Malagasy fihaviana. Misarika ny sain’ny mpitoraka bilaogy maro ilay halakin’ny fanatanterahana ny fombafombam-pandroahana hivoaka ny zaratany frantsay. Indreto misy hevitra sy fijoroana vavolombelona momba ity raharaha ity.
Avoitran’i Blog d’Hiver ohatra fa :
Tao anatin’ny taona vitsivitsy izay dia nodidiana handroaka olona tsy manana taratasy hatramin’ny 25.000 isan-taona Prefe sy ny polisy any an-toerana. Ny fandroahana ny ankohonana manontolo no paika vaovao nampiharina tamin’ny taona 2006 : Miaraka meloka ny ray aman-dreny sy ny zanany amin’izay tonga dia misy 4 na 5 aloha izay voaroaka hanatrarana vetivety ilay tanjon’ny 25.000 isan-taona.
Sarotra tsy araka izay nantenaina anefa ny nampiharana ilay didy. Nisy mpizaka ny zom-pirenena frantsay maromaro manko raha nahita ny polisy tonga nisambotra ankizy mpianatra tany an-tsekoly na nisambotra zaza tany amin’ny tobim-panaovana vakansy nahasahy nandray an-tanan-droa (efa mampigadra koa manko izao ny fanampiana ireo olona tsy manana antotan-taratasy ijanonana any Frantsa) amin’ny fiarovana ireo ankohonana samborina ireo. Anisan’izany ny “Réseau Education Sans Frontières. »
Mahalala tsara ny Malagasy fa voafehin’ny lalana manokana ny resaka fifindra-monina. Na izany aza, mangidy mafaitra amin’ny mpitoraka bilaogy maro ny fomba anatanterahana ny fandroahana.
Anisan’izany, Harinjaka izay mitantara toy izao: Amin’izao fotoana izao indrindra dia eo ampisintosintonana NENIBE malagasy 71 taona handroaka azy hiala amin’ny firenena ny polisy frantsay na dia efa nonina tao Frantsa nandritra ny dimy taona aza. Ny atsasa-manilan’ny zanany 7 amin’io dia monina ao Frantsa. Ny hafa sisa kosa dia eo ampikarakarana ny fahazoana zom-pirenena (frantsay raha ny fahazoan’ny mpandika teny azy) eto Madagasikara. Frantsay io fianakaviana io, efa tafiditra sy mandray anjara amin’ny fiainam-pirenena any Frantsa. Efa fotoana amin’izay izao hieritreretana…
Misy ohatra amin’ny fandroahana « rapida  » ihany koa amin’ity sombin-dahatsoratra manaraka ity :
Sarintsarim-pitsarana, tahaka ny fahita mahazatra rehefa misy raharaha mikasika vahiny, ihany ny fandalovany tao amin’ny tiribonaly. Tsy nandefa solontena ny tany amin’ny Prefe. Tsy nisoka-bava hiaro sady tsy nampiseho ny dôsie avy amin’ny komity mpanohana na dia iray akory aza ilay mpisolovava notendrena hiaro ny “voampanga”; voatery niady irery hiaro ny tenany I Mélanie manoloana ilay mpitsara mianjonanjona manao tsinontsinona izay fandresen-dahatra nataony.
Nigadona ny 25 desambra, niaina voalohany izany hoe Noely tsy niaraka tamin’ny reniny voatana any amin’ny tobim-pitazonana I Winnie kely izay telo taona sy tapany. Ny 26 desambra, nentina tany Roissy (seranam-piaramanidina) mba halefa an-katerena aty Madagasikara amin’ny alalan’ny fiaramanidina I Mélanie. Hilaozany Lafrantsa, firenena azo heverina avy hatrany fa tsy hahazoany visa intsony. Fa ny tena ilaozany ao Paris dia I Winnie zanany, telo taona sy tapany, mianatra ao amin’ny boriborintany faha-18, ho eo ambany fiahian’ny rainy, saingy ho kamboty (velon-d)reny tsy fidiny.
Tsy nampino ahy ny tantara, saingy izao tokoa no vitany : Noroahiny ny reniny ary nosarahany tamin’ny zanany vavikely teraka tao Frantsa. Aoka indrindra re tsy hiteniteny aminay ny momba ny zo fototra na zon’ny ankizy aorian’izany tantara izany…
I Vola kosa ao amin’ny bilaoginy Brotherhood  dia niangavy mba hamaky ny fijoroana vavolombelon’ireto voaroaka iretono nampirisika ihany koa hampiely azy :
Ataovy vita printy sy vakio ange ny traktan’ity fikambanana miasa anilan’ireo efa mialokaloka, mpifindra monina sy mangataka fialokalofana fa maneho fijery hafa mihitsy momba ity fifindra-monina ity.Ary hoy izy namehy ny teniny :Tsy maintsy atsahatra hatreo ny mijery ny fifindra-monina ho olana !
Mihevitra ihany koa izy (tsindrio eto)  fa singa amin’ny ho avin’i Lafrantsa io: Alaivo sary an-tsaina kely ange ny fahavitrihan’ireo olona ireo mitady ny fomba rehetra iasana mba ahafahany miditra anaty fiaraha-monina fotsiny ihany.
Anjaran’i SipaKV ny namaran-teny mikasika ilay oronantsarimihetsika nosoratan’i Rachid Bouchareb mitondra ny lohateny hoe « Indigènes » (miresaka ny momba ny fanolorantena hatao sorona ho famonjena an’i Frantsa, tamin’ny taona 1944-45, nataon’ireo ray sy raiben’ireo tsy manana atontan-taratasy ipetrahana [any Frantsa] ankehitriny), nanao hoe :Na izany na tsy izany, ny tena tiako lazaina dia hoe : “ MISAOTRA anao Atoa Bouchareb ! MISAOTRA ry mpilalao ny sarimihetsika ” ( Indigènes)”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2007/09/12/3/
 Blog d’Hiver : http://tcmada.zeblog.com/143119-pendant-la-campagne-la-chasse-aux-sans-papiers-bat-son-plein
 fandroahana : http://tcmada.zeblog.com/138333-melanie-la-prefete-le-ministre/
 (tsindrio eto): http://vola.ralambo.free.fr/blog/2007/01/etrange-tranger.html
 SipaKV : http://www.haisoratra.org/gasycool/?p=268